काविमोको उपन्यास 'फातसुङ' सार्वजनिक| Nepal Pati
काठमाडौं । नेपालीभाषी भारतीय लेखक छुदेन काविमोको उपन्यास ‘फातसुङ’ शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।
‘फातसुङ’ लेप्चा शब्द हो। लेप्चा भाषामा ‘फातसुङ’ को अर्थ हुन्छ, माटोको कथा । ठेट दार्जिलिङे लवजमा प्रस्तुत उपन्यास ‘फातसुङ’ले माटोको कथा अर्थात दार्जिलिङको धरतीको कथा भन्छ । यस उपन्यास जातीय पहिचानका लागि गरिएको आन्दोलन चियाउने एउटा आँखीझ्याल भएको लेखकको टिप्पणी छ ।
उक्त कार्यक्रममा लेखक खगेन्द्र संग्रौला, युवा लेखक भूषिता वशिष्ठ र उपन्यासकार काविमोले किताब लोकार्पण गरेका हुन् । भाषाका लागि गरिएको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको पृष्ठभूभिमा उपन्यासको कथा बुनिएको प्रकाशक फाइनप्रिन्टका अजित बरालले बताए ।
‘काविमोको लेखन शैली यति विशिष्ट र पृथक छ, फातसुङको पहिलो दुई पेज पढ्नेबित्तिकै उत्साहित भएर मैले लेखकलाई फोन गरेको थिएँ, र भनेको थिएँ, उपन्यास राम्रो होलाजस्तो छ! पढ्दै गएपछि त कायलै भएँ,’ उनले बताए।
‘काबिमो’ युवा साहित्य अकादमी पुरस्कारले पुरस्कृत हुँदाको तस्बिर
नेपाली भाषाका लागि सन् २०१८ को युवा अकादमी पुरस्कार विजेता काविमोले उपन्यासको पृष्ठभूमि बताउँदै भने, ‘सन् १९८६ मा पहिलोचोटि अलग राज्य माग गर्दै दार्जिलिङमा ‘गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन’ भएको थियो। त्यसमा सयौं मारिए। हजारौंका सपना भत्काइए। फातसुङ त्यही सपनाहरुको कथा हो।’
वक्ता भूषिता वशिष्ठले पुस्तक बारे बोल्दै पुस्तकले आफ्नो बाल्यकाल सम्झाएको बताइन्। ‘तिनले मात्र क्रान्ति गर्न सक्छन्, जोसँग पेट छैन भन्ने दृष्टिकोण पुस्तकले उजागर गर्न खोजेको छ,’ उनले भनिन्, ‘भाषा र क्रान्तिको सम्बन्ध धेरै गहिरो छ। राजनीतिक चेतनाको सूत्रधार भाषा हो। कतिपय अवस्थामा जनताको राजनीतिक चेतना अपूर्ण रहेकै कारण क्रान्ति तुहिएका छन्। फातसुङजस्ता लोकभाषी पुस्तकको महत्ता दूरगामी छ।’
यसले लोकभाषा जीवन्त राख्न पनि सघाउने उनको भनाइ थियो । ‘यो पुस्तकले त्यस्तो कथा बोक्छ, जसले धारा १४४ र गाउँमा आउने धाराको फरकपन छुट्याउन सक्दैनन्,’ उनले भनिन्।
त्यस्तै अर्का वक्ता संग्रौलाले सानो कलेवरमा आएको पुस्तकले धेरै ठूलो कथा बोकेको बताए। यसले दार्जिलिङको माटोको कथा जीवन्त रूपमा देखाएको उनको टिप्पणी छ।
फाइनप्रिन्टले प्रकाशनमा ल्याएको यस पुस्तकको मुल्य रु. ३०० रहेको छ ।